10 SEO Tips ho an'ny WordPress tranokala avy amin'ny Semalt
Mikaroka ireo "zavatra teknika" sasany toy ny alt tags, anaran'ny rakitra,sy teny fanalahidy. Ny fahatakarana ny fomba fiasan'ireo "zavatra ara-teknika" ireo dia mety hitondra fahombiazana eo amin'ny orinasa, rehefa tsy miraharaha anao ny fanaovana tsinontsinona azy ireo.
Artem Abgarian, mpitantana ny Success Successor Semalt ,manome torohevitra sarobidy momba ny fomba ahafantarana amin'ny Internet amin'ny tranokalan'ny WordPress anao - curso de fotografia digital.
Ny votoatiny no fanatsarana tsara indrindra. Ny fampandrenesana dia mahomby raha mitazona azy ioamin'ny alàlan'ny votoatiny sy kalitao. Ny lahatsoratra sy ny teny fototra dia manasongadina ny lohahevitry ny lahatsoratra. Ny votoatiny dia tokony hifantoka amin'ny filàn'ny vahiny fa tsy ny fikarohanamilina. Ilaina ihany koa ny mamaky sy azo ekena.
Fifanakalozana havaozina. Raha vita io fifanakalozana io ary misy rohy tonga avy amin'ny
Fametrahana anaran-tsarimihetsika ho an'ny sary. Hijery ny sary mahaliana indrindra sylahatsoratra hita ao anaty lahatsoratra, Google dia mampiseho ny valiny rehetra mifandraika aminy noho ny fangatahana natao. Tsara ny mampiasa teny fanalahidy iray manokana
Fanomezana fohy fohy izay misy teny fanalahidy. Mahazo tombony ny fahazoan-dalana mahazatra mahazatrato business. Ao amin'ny permalink, ny teny efatra voalohany dia manan-danja, satria i Google dia mamafa ny teny rehetra manaraka..
Fikarohana lohahevitra mendrika. Ny lohahevitry ny tranonkala sasany dia mampiasa code betsaka loatra mba hamoronanany layout sy ny famolavolana. Google dia tsy maintsy mamaky amin'ny alàlan'ny code-n'ilay loharano mba handripaka ny votoatiny mifanentana. Ny sarotra kokoa dia ny code, dia ny kely indrindrany votoatiny, ary ny dika tenenina. Ny fahaiza-manao dia singa manan-danja amin'ny famaritana ny fikarohana, ka izany dia manatsara ny fampivoarana haingana ny lohahevitrany fandrindrana Google an'ny orinasa.
Mamorona sitemap ao amin'ny format XML. Mora ny manatanteraka io asa io amin'ny fampiasana azyGoogle XML Sitemaps plugins. Ny loharano hafa ampiasaina dia ny Website Optimizer ary ny Webmaster Central.
Asongadinao ny votoatiny na ny teny fanalahidy. Ny fanalahidy h1-h6 dia manampy hanasongadinanalohateny, dikanteny, na hafatra manan-danja ao anaty lahatsoratra.
lahatsoratra momba ny tambajotra sosialy. Ny fametrahana amin'ny tambajotra sosialy dia malina amin'ny fanatsarana ny SEO.Na dia mampivoatra ny lanjany ho an'ny SEO aza ny lahatsoratra, dia tokony ho maro samihafa ny lahatsoratra ary tsy ny raharaha fotsiny ihany. Hanampy anao hifanerasera tsara izanyeo anelanelanao sy ny mpihaino anao.
Mitazona ny fanao SEO mainty. Sarotra ny mamitaka an'i Googleamin'ny fampiasana tranonkala mainty na spagna HTML, araka ny hitan'i Google azy ireo amin'ny farany ary mamely sazy henjana.
Miasa amin'ny sehatra havanana. Aza avela mampiasa Flash izany satria tsy hita maso izany
, ary ampiasao ny WordPress.
Ny SEO dia manatsara ny habetsaky ny kalitaon'ny kalitaon'ny tranonkala iray. Mitady fanampiana ny milina fikarohanaamin'ny fanatanterahana izany amin'ny alàlan'ny fitaterana ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny "natiora" na "valisoa" tsy hita. Ny teoria ao ambadik'izany dia ny tranonkala taloha na ambony kokoadia hita ao amin'ny laha-tahiry vokatra, ny mpitsidika lehibe kokoa no raisina.